आखिर किन मिस नेपालले नै,बलत्कारीलाई मृत्यु दण्ड दिनु हुँदैन भनिन ? यस्तो छ कारण ( भिडियो सहित् ) – Gandaki Media
बुधबार राति देशका फरक-फरक स्थानबाट आएका २५ जना सुन्दरीले आफ्नो सपनाको प्रतिस्पर्धामा भाग लिए । करिब ७ हप्ता लामो तालिमबाट खारिएका उनीहरु कोहीभन्दा कोही कम थिएनन् । तर, उनीहरुमध्ये ४ जनाको सपनाको ढोका खुलेको छ ।
काठमाडौंको अन्नपूर्ण होटलमा आयोजना भएको ‘मिस नेपाल वर्ल्ड’ को टाइटल श्रृङ्खला खतिवडाले जितिन् । यसैगरी, ‘मिस नेपाल इन्टरनेसनल’ रोनाली अमात्य, ‘मिस नेपाल अर्थ’ प्रिया सिग्देल र मिस नेपाल यूनिभर्स मनिता देवकोटा अब एउटा सामान्य युवतीबाट सेलिव्रेटी बनेका छन् । उनीहरुको जीवन अब बदलिएको छ ।
यी चार सुन्दरी आफूहरुले पाएको ताजको इज्जत र गरिमालाई गिर्न नदिने बताउँछन् । देशलाई विश्वमा चिनाउने उनीहरु चारै जनाको धोको छ । विगतका मिस नेपालहरुको तुलनामा यसपालीका सुन्दरीबाट बढी आशा गर्न सकिन्छ ।
उनीहरु कसरी यो टाइटलको विजेता बने ? अब उनीहरुको योजना के छ ? यो टाइटलको साख राख्नका लागि उनीहरुले के-कस्ता काम गर्छन् होला ? हामीले उनीहरुसँग एकसाथ कुराकानी गरेका छौ ।
‘कृ’ नायिका अदितीका बोल्ड तस्बिरहरु-(फोटो फिचर)
बलिउडमा संघर्षरत रहेकी नायिका अदिती बुढाथोकी नेपाली चलचित्र ‘कृ’ मार्फत नेपाली रजतपटमा भित्रिएकी हुन् ।नायक अनमोल सँग पहिलो पटक फिल्ममा देखीएपनि अभिनय भन्दा पनि शुन्दरताको कारण बढी चर्चित रहीन् । फिल्ममा काम गर्न हतार नभएको भन्दै हाल उनी मुम्बईमा विभिन्न प्रशिक्षणमा ब्यस्त छिन् ।
हिन्दी म्युजीक भीडीयोमा काम गरीसकेकी अदितीको सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै प्रशंसक रहेका छन् ।अदिती सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका हट अनि बोल्ड तस्बिरहरुका कारण पनि चर्चामा आउने गरेकीछिन् ।